“एस्क्लुसिभ भिडियो – जन्मदिने आमासंग बस्ने भए सचिन परियार ! सचिनको पैसा देखेर आइस भन्नेलाई आमाले दीइन क’डा जवाफ – News452Online
“एस्क्लुसिभ भिडियो – जन्मदिने आमासंग बस्ने भए सचिन परियार ! सचिनको पैसा देखेर आइस भन्नेलाई आमाले दीइन क’डा जवाफ
Posted byadmin	 April 19, 2021 Leaveacomment on “एस्क्लुसिभ भिडियो – जन्मदिने आमासंग बस्ने भए सचिन परियार ! सचिनको पैसा देखेर आइस भन्नेलाई आमाले दीइन क’डा जवाफ
काठमाडौं । केहि समय अगाडीबाट निकै नै भाईरल बनेका सचिन परियारका बुवा तेजेन्द्र परियार बिबादमा तानिएका छन् । सचिन परियार कि आमा घरमा हुदा हुदै पनि तेजेन्द्र परियारले अर्को श्रीमती ल्याएका रहेछन । सचिन परियार भाईरल हुदै गर्दा सचिन परियार कि आमा छोराको न्यास्रो लाग्यो,भेट्न पाउनु पर्छ भनेर मिडियामा आएपछी झन् चर्को बिबादमा आएका हुन् ।
तेजेन्द्र परियारका बुबा बिबादमा आईरहदा तेजेन्द्र परियारको दोश्रो श्रीमती मिडियामा आएकी छन् । एक बच्चा सहित् घरबाट काठमाडौं भेट्न आएको तेजेन्द्र परियारकी श्रीमतीले घर भित्रको आन्तरिक कुरा बाहिर ल्याएकी छन् ।
श्रीमती माथिको कुराको खण्डन गर्दै प्रश्न त्रेस्यौदा म कामको लागि बाहिर गएको हु भने मलाई घरमा श्रीमतीको किच किच सहन न सकेर बाहिर गएको हु म कलह सहन सक्दिन म अर्को बिहेसमेत गर्न सक्छु जस्ता ठाडो जवाफ मिडियामा दिएका छन् । एक अन्तरबार्तामा भनेका छन् म माथि न चाईदो कुरा गरेका छन् ।
Posted byadmin April 19, 2021 Posted inrochak
देखेको ७ सेकेण्डमा साँचो मनले कमेन्टमा ॐ लेखेर शेयर गर्नुहोस 🙏 १५ घण्टा मा सुखद समाचार पाउनु हुनेछ नत्र ठूलो अनिष्ट..
कोरना हस्पिटलमा कार्यरत न,र्सको को,रना लागेर मृ,त्यु ।